Iinqwelomoya eziNtsha ezi-3 eziya eJamaica zisuka eBelgium naseNetherlands ngo-Epreli
January 20, 2022 0 1 imiz efundwayo
Umfanekiso ngoncedo lwe-elmnt evela ePixabay
I-TUI yaseBelgium iya kuqhuba iinqwelomoya ezimbini ezithe ngqo ngeveki nganye phakathi kwe-Airport ye-Brussels International kunye ne-Montego Bay, ngelixa i-TUI Netherlands iya kusebenza ngenqwelomoya enye ngqo ngeveki phakathi kwe-Airport ye-Amsterdam Schiphol International kunye ne-Montego Bay. IBoeing 787 Dreamliners enezihlalo ezimalunga nama-300 inye isetyenziswa kwiinqwelomoya.
“Sikhuthazeke kakhulu sesi sibhengezo kunye nefuthe elinokuba nalo kwicandelo lethu lezokhenketho.”
"Ezi nqwelomoya ziya kubuyisela iimarike zokhenketho zaseBelgian naseNetherlands apho bezikhona ngaphambi kobhubhane."
“Nangona le minyaka mibini idlulileyo ibingumsebenzi onzima, sisebenze ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wokugcina Jameyikha ngokuqinileyo ezingqondweni zamaqabane ethu abalulekileyo kumazwe ngamazwe iyomelezwa yonke imihla,” utshilo uBartlett.
IBelgium neNetherlands zinabemi abadityanisiweyo abangaphantsi nje kwezigidi ezingama-30, imivuzo ephezulu yomntu ngamnye, kunye nomdla oqinileyo wokuhamba kumazwe ngamazwe. Bakwasembindini weManyano yaseYurophu, enomoya omkhulu kwaye ongenamthungo, uloliwe, kunye noqhagamshelo lwendlela kwamanye amazwe amaninzi aseYurophu.
Ezi ndaba ziza njengoko uMphathiswa wezoKhenketho oHloniphekileyo u-Edmund Bartlett kunye neqela elincinane bezimase iFITUR, owona mboniso ubalulekileyo wohambo lwamazwe ngamazwe kunye nokhenketho lwehlabathi, ngoku oqhubekayo eMadrid, eSpain.
UDelano Seiveright, uMcebisi oMkhulu kunye noMcwangcisi woBuchule kwiSebe lezoKhenketho ubalule ukuba “iinqwelomoya zaseBelgium nezaseDatshi ziya kuzisa kwisibhozo inani leenqwelomoya ngeveki phakathi kwelizwekazi laseYurophu neJamaica. Iinqwelomoya ezine ziqhutywa phakathi kweFrankfurt, iJamani kunye neMontego Bay, eJamaica ngabathwali baseJamani iCondor kunye ne-Eurowings Discover.
Ukongeza, siya kugcina inkonzo ngqo ngeveki phakathi kwe Zurich, Switzerland, kunye ne Montego Bay, Jamaica. Asizibandakanyi iinqwelomoya ezimalunga neshumi elinesihlanu ezingamisiyo ngeveki phakathi kweUnited Kingdom neJamaica eziqhutywa yiVirgin Atlantic, British Airways, kunye neTUI kolu vavanyo, “wongeze uSeiveright.
"Inani elikhulu labantu abaphumeleleyo eFITUR libonisa ngokungathandabuzekiyo ukuba ukhenketho lukwindlela yokukhula eqinileyo, kwaye kufuneka siqinisekise ukuba abantu baseJamaican bayazuza. Kufuneka singaze sikulibale ukukhawulezisa kokhenketho, okwenza ukuba kufakwe inkcitho kwezokhenketho kuqoqosho lweli. Ukhenketho alunakubakho lodwa, njengoko lushishino lwesixokelelwano sobonelelo olubandakanya amacandelo amaninzi ezoqoqosho, kuquka ezolimo, ezemveliso kunye nezothutho. Le yindlela yezoqoqosho nokuzinza iyafezekiswa,” utshilo uBartlett.
Oku ngakumbi: iBoeing | Jemani | elamaDatshi | isikhululo | Jameyikha | iYurophu | iunited Kingdom | Amsterdam | UEdmund Bartlett | Bheljiyam | Eurowings | Tourism | Brussels
I-Turks kunye neCaicos: USihlalo omtsha kwiBhodi yabaKhenketho Tourism|
Inqwelomoya enexabiso eliphantsi kakhulu inikezela ngeeFlights eziNtsha zaseKhanada isikhululo|
isikhululoAmsterdamBheljiyamiBoeingBrusselsUEdmund BartlettiYurophuEurowingsJemani JameyikhaelamaDatshi Tourismiunited Kingdom
U-Linda Hohnholz ubengumhleli oyintloko eTurboNews iminyaka emininzi. Uyakuthanda ukubhala kwaye unika ingqwalasela enkulu kwiinkcukacha. Ukwalawula yonke imixholo yeprimiyamu kunye noshicilelo lweendaba.
I-Rwanda ayisafuni uvavanyo lwe-PCR kubantu abatsha abafika kumazwe angaphandle
Umsebenzi wokwenza ukhenketho kunye nokhenketho wehle nge-28.1% ngo-Epreli wama-2022
Uninzi lwelanga ngemali encinci: Iindawo ezishibhile zokukhanya kwelanga
Ukuhamba kwabakhweli bomoya phakathi kwe-USA kunye neYurophu ukuya kwi-1,003%
Abalindi be-Flight bamangalela ii-Alaska Airlines kunye neManyano yokuBanga uCalucalulo lweNkolo kwiiFirings
I-Skål International Usa Yazisa Ngabamkeli Bayo BobuNkokheli boShishino lweSizwe
egqithileyo Intshiseko entsha, inkuthazo kunye nokuzibophelela kwi-20th IMEX Frankfurt
Okulandelayo I-Austria yenza ugonyo lwe-COVID-19 lube sinyanzelo kubo bonke abemi